အပိုလို ၁၅ - ဝီကီပီးဒီးယား
James Irwin က လကမ္ဘာပေါ်တွင် အမေရိကန်အလံကို အလေးပြုနေစဉ် ဩဂုတ် ၂၊ ၁၉၇၁
၄၈,၅၉၉ ကီလိုဂရမ် (၁၀၇,၁၄၂ ပေါင်)
၅,၃၂၁ ကီလိုဂရမ် (၁၁,၇၃၁ ပေါင်)
၁၀၁.၅ ကီလိုမီတာ (၅၄.၈ ရေမိုင်)
၁၂၀.၈ ကီလိုမီတာ (၆၅.၂ ရေမိုင်)
၇၇ ကီလိုဂရမ် (၁၇၀ ပေါင်)
၂၇.၉ ကီလိုမီတာ (၁၇.၃ မိုင်)
PFS-1: ၇၈.၅ ပေါင် (၃၅.၆ ကီလိုဂရမ်)
LRV: ၄၆၃ ပေါင် (၂၁၀ ကီလိုဂရမ်)
← အပိုလို ၁၄ အပိုလို ၁၆ →
အပိုလို ၁၅ (ဇူလိုင် ၂၆ – ဩဂုတ် ၇ ၁၉၇၁) သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ စတုတ္ထမြောက် လပေါ်သို့ဆင်းသက်သည့် အပိုလို စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခင် ဆင်းသက်မှုများထက် သိပ္ပံပညာရပ်ပေါ်တွင် ပိုမိုလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အပိုလို ၁၅ သည် လကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံး Lunar Roving ယာဉ်ကို အသုံးခဲ့သည်ကိုတွေ့ရသည်။ စီမံကိန်းသည် ဇူလိုင် ၂၆ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဩဂုတ်လ ၇ ရက်တွင် ပြီးဆုံးသည်။ လမျက်နှာပြင် စူးစမ်းလေ့လာမှုများကို ဇူလိုင်လ ၃၀ နှင့် ဩဂုတ်လ ၂ ရက်ကြားတွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်မှူးများသည် လမျက်နှာပြင်တွင် ၁၈ 1⁄2 နာရီကြာ အချိန်ကုန်စေခဲ့ပြီး မျက်နှာပြင်နမူနာပစ္စည်း ၁၇၀ ပေါင် (၇၇ ကီလိုဂရမ်) ကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ အပိုလို ၁၅ သည် ကမ္ဘာမြေသို့ပြန်လာရာ အဆင်းတွင် လေထီး ၃ ခုထဲမှ တစ်ခု ပျက်စီးခဲ့သော်လည်း ဩဂုတ် ၇ ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင် Scott က ဂယ်လီလီယို၏ လေခုခံမှုမရှိသောနေရာတွင် အရာဝတ္ထုအားလုံးသည် ဒြပ်ဆွဲအားကြောင့် အတူတူ ကျဆင်းသည့် သီအိုရီကို သက်သေပြသည့်အနေဖြင့် တူနှင့် ငှက်မွှေးကို ပြိုင်တူချကာ စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
↑ Orloff၊ Richard W. (2004) ။ "Table of Contents"။ Apollo by the Numbers: A Statistical Reference။ NASA History Series။ Washington, D.C.: NASA။ ISBN 978-0-16-050631-4။ August 23, 2007 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 18, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ Apollo 15 Lunar Module /ALSEP။ NASA Space Science Data Coordinated Archive။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ ၃.၅ Mission Report, p. 3.
↑ Apollo 15 Command Module။ Smithsonian Air and Space Museum (March 17, 2016)။ 22 July 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lunar Module LM-2။ Smithsonian Air and Space Museum (March 21, 2016)။ 15 January 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 14 September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mission Report, p. 263.
↑ ၇.၀၀ ၇.၀၁ ၇.၀၂ ၇.၀၃ ၇.၀၄ ၇.၀၅ ၇.၀၆ ၇.၀၇ ၇.၀၈ ၇.၀၉ ၇.၁၀ ၇.၁၁ Orloff၊ Richard W. (2005) ။ "Apollo 15 timeline"။ Apollo by the Numbers: A Statistical Reference။ NASA History Series။ Washington, D.C.: NASA။ ISBN 978-0-16-050631-4။ January 29, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ ၁၀.၄ Mission Report, pp. 10–11.
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Orloff၊ Richard W. (2005) ။ "Apollo 15 The Ninth Mission: The Fourth Lunar Landing 26 July–7 August 1971"။ Apollo by the Numbers: A Statistical Reference။ NASA History Series။ Washington, D.C.: NASA။ ISBN 978-0-16-050631-4။ January 29, 2019 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ NASA NSSDC Master Catalog – Apollo 15 LM descent stage။ NASA Space Science Data Coordinated Archive။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အပိုလို_၁၅&oldid=687594" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။